DataRobot: Sehatra ianarana milina mandeha ho azy amin'ny orinasa | Martech Zone
DataRobot: Sehatra ianarana milina maotera orinasa
Talata, Oktobra 24, 2017 Talata, Oktobra 24, 2017 Douglas Karr
Taona maro lasa izay dia tsy maintsy nanao famakafakana ara-bola goavana ho an'ny orinasako aho haminavina raha mety hampihena ny fihenan'ny mpiasa, ny vidin'ny fiofanana, ny famokarana ary ny fari-piainan'ny mpiasa amin'ny ankapobeny ny fiakaran'ny karama. Tsaroako ny nihazakazako sy nisedra modely maro nandritra ny herinandro maro, nanatsoaka hevitra daholo fa hisy ny tahiry. Lehilahy tsy mampino ny talenako ary nangataka ahy hiverina hanamarina azy ireo indray mandeha alohan'ny nanapahanay hevitra hikapoka karama ho an'ny mpiasa an-jatony vitsivitsy. Niverina aho ary nihazakazaka indray ireo isa… miaraka amin'ny valiny mitovy.
Nandeha namaky ny modely nataoko aho. Nitraka izy ary nanontany hoe: “Hiloka ny asanao ve ianao amin'izany?”… Matotra izy. "Eny." Taorian'izay dia nampiakatra ny karama farany ambany an'ny mpiasanay izahay ary nitombo avo roa heny ny tahirimbola nandritra ny taona. Ny maodeliko dia naminavina ny valiny marina, saingy lavitra ny fiantraikany amin'ny ankapobeny. Tamin'izany fotoana izany dia izay no tsara indrindra azoko nomena tamin'ny Microsoft Access sy Excel.
Raha nanana ny tanjaky ny informatika sy ny fahaizan'ny milina misy aho anio, dia ho nanana valiny afaka segondra aho, ary faminaniana marim-pototra momba ny fitehirizana vola kely misy lesoka kely. DataRobot dia tsy ho fahagagana fotsiny.
DataRobot dia mandeha ho azy ny fe-potoana rehetra anaovana modely, ahafahan'ny mpampiasa manangana modely maminavina tena marina. Ny hany ilaina ilaina dia ny te hahafanta-javatra sy ny angona - ny kaody sy ny fahaiza-mianatra amin'ny milina dia tsy voatery!
DataRobot dia sehatra iray ho an'ny Apprentice momba ny siansa data, mpandinika momba ny asa aman-draharaha, mpahay siansa momba ny angona, mpanatanteraka, injenieran'ny rindrambaiko, ary ireo matihanina amin'ny IT mba hamoronana, hizaha toetra ary hanatsarana ireo maodely data sy haingana. Ity ny horonantsary topimaso:
Tsotra ny fizotry ny fampiasana DataRobot:
Mihinana ny angonao
Safidio ny variable target
Manamboara modely an-jatony amin'ny tsindry iray
Mikaroha modely ambony ary mahazoa hevitra
Mampiasà modely tsara indrindra ary manaova faminaniana
Araka ny DataRobot, ny Advantages dia misy:
marina - Na dia mandany ny kalitao aza ny mandeha ho azy sy ny hafainganana, ny DataRobot dia miavaka manokana amin'ireo lafiny rehetra ireo. DataRobot dia mandeha ho azy amin'ny fikarohana amin'ny alàlan'ny algorithma an-tapitrisany, ny dingana fanomanana mialoha ny data, ny fanovana, ny fiasa ary ny fari-pitantanana ny maodely fianarana milina tsara indrindra ho an'ny angon-drakitrao. Ny maodely tsirairay dia miavaka - tsara ho an'ny seta manokana sy ny tanjon'ny vinavina.
Speed - DataRobot dia misy maotera maodely mirazotra mifanindran-dàlana izay afaka mivezivezy amina mpanjifa mahery an-jatony na an'arivony mihitsy aza hijerena, hananganana ary hampifanaraka ny maodely fianarana milina. Datasets lehibe? Datasets malalaka? Tsisy olana. Ny hafainganam-pandeha sy ny refy amin'ny maodely dia voafetra ihany amin'ny alàlan'ny loharanom-pahalalana azo eo amin'ny DataRobot. Miaraka amin'ity hery ity, ny asa izay efa nandany am-bolana maro dia vita ao anatin'ny ora vitsivitsy monja.
Tsy manana ahiahy,-of-Ampiasao - Ny interface web-intuitive intuitive dia mamela ny olona rehetra hifanerasera amin'ny sehatra matanjaka be, tsy ijerena ny haavon'ny fahaiza-manao sy ny fianarana milina. Afaka misintona-sy-mitete ireo mpampiasa ary avelao ny DataRobot hanao ny asa rehetra na afaka manoratra ny maodelin'izy ireo manokana ho an'ny fanombanana avy amin'ny sehatra. Ny sary an-tsary namboarina, toy ny Model X-Ray sy ny Feature Impact, dia manome ny fomba fijery lalina sy fahatakarana vaovao momba ny orinasanao.
Ecosystem - Tsy mora toy izao ny manaraka ny ekosistra mitombo eo amin'ny fianarantsika algorithman. DataRobot dia manitatra tsy tapaka ny karazana algorithms isan-karazany sy tsara indrindra avy amin'ny R, Python, H20, Spark, ary loharano hafa, manome ny mpampiasa ny andiana analytics tsara indrindra ho an'ny fanamby mialoha. Amin'ny alàlan'ny tsindry tsotra an'ny bokotra Start, dia afaka manaparitaka teknika tsy mbola nampiasainy hatrizay na mety tsy fantany akory ireo mpampiasa.
Fametrahana haingana - Ireo maodely faminaniana tsara indrindra dia tsy misy lanjany firy na tsy misy fandaminana aza raha tsy hoe miasa haingana ao anatin'ny orinasa izy ireo. Miaraka amin'ny DataRobot, ny fametrahana modely ho an'ny faminaniana dia azo atao amin'ny fikitihana totozy vitsivitsy. Tsy izany ihany fa ny maodely rehetra namboarin'i DataRobot dia mamoaka endpoint REST API, ary mahatonga azy ho tsio-drivotra mifangaro ao anatin'ny rindranasan'ny orinasa maoderina. Afaka mahazo sanda ara-barotra avy amin'ny fianarana milina ao anatin'ny minitra vitsivitsy izao ny fikambanana, fa tsy miandry volana maro hanoratana kaody fanaovana isa sy hiatrehana ireo fotodrafitrasa misy eo ambaniny.
Enterprise-grade - Ankehitriny, ny fianaran'ny milina dia misy fiantraikany amin'ny fizotry ny raharaham-barotra tsy mitsaha-mitombo, tsy azo atao intsony ny mandray azy io ho toy ny fitaovan'ny mpampivelatra miaraka amin'ny fiarovana kely, fiarovana manokana ary fitohizan'ny orinasa. Raha ny marina dia manakiana fa ny sehatra hananganana sy hametrahana modely dia hamafisina, azo atokisana ary hifandray tsara amin'ny tontolo iainana ny teknolojia ao anatin'ny fikambanana.
Manomàna Demo mivantana an'ny DataRobot
Tags: aifahaizana artifisialyfianarana milina mandeha ho azyfihinanana datadata mialohadata sciencesary an-tsarydatarobotdatasetsfiatraikany endri-javatrah2odatasets lehibefianarana milinamaodely x-raymaotera modelyhoavyPythonrkilalaon'afo
Douglas Karr Tuesday, October 24, 2017 Tuesday, October 24, 2017
Azafady Aza Mamaly ny fangatahana media sosialy amin'ity fomba ity
Paikady 6 ampiasain'ny trano fandraisam-bahiny hahazoana tombony amin'ny marketing Facebook